Shirkii Baarlamaanada Wadamada Islaamka oo Soo Idlaaday iyo Qodobo Soomaaliya Khuseeya oo kasoo baxay +(Sawiro)
HomeCommunity EventsTestContact UsPoetryGabay ” Daduub” – Qaman BulxanGabay – “Dacartuba” – QaasimMay 19, 2013	You are here: Home / News / Shirkii Baarlamaanada Wadamada Islaamka oo Soo Idlaaday iyo Qodobo Soomaaliya Khuseeya oo kasoo baxay +(Sawiro)	Shirkii Baarlamaanada Wadamada Islaamka oo Soo Idlaaday iyo Qodobo Soomaaliya Khuseeya oo kasoo baxay +(Sawiro)
January 24, 2013 By Geelle Wadhaf News-Jan.24, 2013: Shirkii Baarlamaanada Wadamada Islaamka ah oo ka koobnaa 57 Dowladood ayaa kusoo gabagaboobay caasimadda dalka Sudan kaasoo laga soo saaray 4- Qodob oo Soomaaliya Si gaar ah Xaaladeeda looga Hadlay.
Qodobadaas ayaa waxa ka mid ahaa.
1- In Dowladda Soomaaliya lagu Amaano laguna dhiira galiyo Howshii Ay qabteen ee looga Baxay KMG-nimadii iyo in la sameeyo Gudiyo Joogta Ah oo arimaha Soomaaliya La socda iyo in la sameeyo sidoo kale gudiyo Sharci dajin ah oo iyagana La socda Howsha ay qabteeb Baarlamaanka Soomaaliya.
2- in Dowladda Cusub ee Dhawaan la dhisay in Gacan buuxda la siiyo Si maadi ah iyo Si mooral ah intaba lana sameeyo Gudi ka hortaga dhibaatadii abaaraha ee Soomaaliya Sanadkii hore ka dhacay oo kale mid la mid ah
3- In Gudi Baarlamaanada wadamada Islaamka ah loo diro Soomaaliya si ay usoo arkaan Xaalada dhabta ah ayna u soo qiimeeyaan baahida dhabta ah ay u baahan yihiin guud ahaan xaalada wadanka gaar ahaan Mida baarlamaanka.
4- Sidoo kale in dib mar kale laysugu yimaado shirarkii Soomaaliya looga hadlayay ee ka kala dhacay Istambuul iyo London si wada hadalada loo sii wado iyo dib u dhiska Dalka Soomaaliya Qodobadii shirarkaas kasoo baxayna loo fulin lahaa.
Shirkan oo soo bilowday 17 bishan ayaa waxa ugu dambeentii aad loogu amaanay Soomaaliya Isbadalka horumarka leh ee ku tilaabsatay iyadoo Xubnihii ka Socday Baarlamaanka Soomaaliya oo uu hor kacayay gudoomiye ku xigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya Jaylaani Nuur Iikar ay ka dhex muuqdeen shirka Baarlamaanada Wadamada Islaamka.